George Floyd:- Askariga lagu Eedeeyay Dilkii George Floyd Ciqaab Noocee Ah Ayuu Wajahayaa ? | Gaaroodi News
George Floyd:- Askariga lagu Eedeeyay Dilkii George Floyd Ciqaab Noocee Ah Ayuu Wajahayaa ?
Waxaa la billaabay dhageysiga dacwadda ka dhanka ah Derek Chauvin, oo ah askarigii ka tirsanaa booliska Mareykanka ee lagu eedeeyay inuu dilay George Floyd.
Dad goob joogeyaal ah oo ku sugnaa magaalada Minneapolis ayaa muuqaallo ka duubay Mr Chauvin – oo caddaan ah – oo jilibka qoorta uga haya Mr Floyd, oo madow ahaa. Dhacdadaas ayaa kicisay mudaharaadyo ka dhacay guud ahaan dalka Mareykanka iyo caalamka, kuwaasoo looga soo horjeeday arxan darrada booliska iyo cunsuriyadda.
Maxaa ku dhacay George Floyd?
Ninkaas oo 46 jir ahaa wuxuu baakad sigaar ah ka iibsaday dukaan ku yaalla Koonfurta magaalada Minneapolis markii ay taariikhdu ku beegneyd 25-kii bishii May ee sanadkii 2020-kii.
Qof ka mid ahaa shaqaalihii dukaanka ayaa aaminsanaa in ninka wax iibsaday uu bixiyay $20 doolar oo been abuur ah, wuxuuna u wacay booliska kaddib markii Mr Floyd uu diiday inuu celiyo sigaarka.
Ciidan ayaa yimid waxayna gacmaha ka xireen Floyd, laakiin markii ay damceen in ay gaarigooda galiyaan wuu diiday. Isjiidjiid kaddib Mr Floyd waxaa af af loo seexiyay waddada dhexdeeda.
Markaas ayey dadkii goobta ka ag dhawaa billaabeen inay muuqaallo ka duubaan.
Mr Chauvin, oo 44 jir ah, ayaa jilibkiisa qoorta ka saaray Mr Floyd, wuxuuna ku hayay in ka badan sagaal daqiiqo, sida ay sheegeen dacwad oogeyaasha.
Labo askari oo kale ayaa ka caawiyay in uu dhulka dhigo, halka mid kalena uu dadkii goob joogeyaasha ahaa ka celinayay inay soo faragaliyaan.
In ka badan 20 jeer ayuu Mr Floyd sheegay in ay neefta ku xirantay. Muuqaalka ayaa laga arkayay isagoo foorara oo lagu qaadayo gaariga booliska.
Saacad kaddib isbitaalkii la geeyay ayaa xaqiijiyay in uu geeriyooday.
Dhageysiga dacwadda ka dhanka ah Derek Chauvin?
Doodda ayaa ayaa la guda galay 29-ka bishan March – oo ku beegan maanta – waxaana la filayaa in ay socoto muddo ugu yaraan hal bil ah.
12 garsoore oo u dhaaranaya inay dacwaddan qaadaan – iyo labo kale oo keyd ah – ayaan magacyadooda lasoo bandhigi doonin, lamana arki doono inta ay socoto dacwadda telefishinka laga sii deynayo.
Garsooreyaasha ayaa go’aan ka soo saari doona in Mr Chauvin uu ciqaab xabsi ah mari doono iyo in dacwaddiisa la iska laali doono midkood. Derek Chauvin waxaa lagu soo oogay dacwad dil ah
Dacwad qaadeyaasha kiiskan wax ka qaban doona ayaa laga codsaday inay soo buuxiyaan su’aalo weydiin jawaabahooda laga dalbaday, iyagoo qeexaya aqoonta ay u leeyihiin kiisaska noocan oo kale ah, ama inay horay wax xiriir ah ula yeesheen booliska iyo warbaahinta.
Maxay tahay dacwadda dilka heerka labaad?
Ciqaabta xabsiga ugu dheer ee lagu xukumi karo waa 40 sano.
Dacwad dil oo heerka saddexaad ah ayaa sidoo kale lagu daray kiiska Mr Chauvin. Khubaradu waxay sheegeen in dacwadda cusub ay ku sahlan tahay in maxkamadda lagu caddeeyo, laakiin ay ka ciqaab yar tahay.
Sida uu dhigayo sharciga u yaalla gobolka Minnesota, ciqaabta ugu weyn ee loo marsiin karo dacwadda dilka ee heerka saddexaad waa 25 sano oo xabsi ah. Darbi silig ah oo dheer ayaa lagu wareejiyay dhismaha makamadda Minneapolis
Waa dhif in dacwad lagu soo oogo askarta ka tirsan booliska Mareykanka, iskaba daa in xukun lagu rido awood xad dhaaf ah oo ay isticmaaleen.
Taas waxaa sabab looga dhigaa in badanaa ay ku doodaan in falalka ay u sameeyaan maadaama ay naftooda u cabsadeen.
Mr Chauvin wuxuu maxkamadda soo hor istaagayaa kaligiis isagoo aysan garbihiisa taagneyn askarta kale ee la eedeysan, maadaama shuruucda xakameynta cudurka Covid-19 aysan oggoleyn in dhammaantood hal mar la wada keeno qolka maxkamadda.
Askarta kale waxaa lagu soo oogay kiisas ku saabsan in ay dilka loo heysto ku caawyeen Mr Chauvin, waxayna maxkamadda imaan doonaan bisha August.
Maxay yihiin xeerarka maxkamadda?
Guud ahaan muddada ay socoto dacwadda waxaa laga daawan doonaa online-ka, arrintaas oo ah mid qeyrul-caadi ah marka loo eego kiisaska dilka ee Mareykanka.
Garsooreyaasha maxkamadda waxay oggolaadeen in kaliya min hal qof oo ka kala socda qoysaska Chauvin iyo Floyd loo oggolaan doono inay maxkamadda xaadiraan mar walba oo dacwadda la dhageysanayo.
Maaskarooyinka hal ku dhigga ku xardhan yahay ayaa laga mamnuucay in maxkamadda dhexdeeda lala galo.
Sidee ayuu Mareykanka uga fal celiyay geeridii Floyd?
Afartii askari ee goobta ku sugneyd ayaa shaqada laga eryay maalintii xigtay, xilli ay dadweyne badan oo mudaharaadaya isugu soo baxeen waddooyinka magaalada Minneapolis.
Saldhiggii ay booliskaas ka shaqeynayeen ayaa dab la qabadsiiyay, mudaharaadyaduna waxay si deg deg ah ugu sii fideen magaalooyinka kale.
Markii la joogay habeenkii lixaad, waxay mudaharaadyo ka socdeen 75 magaalo oo ka tirsan Mareykanka – qaarkoodna rabshado ayey wateen – waxaana si weyn u baahday dood qaran oo ku saabsan sida adag ee ay boolisku ula dhaqmaan Mareykanka-Mado June 2020: Mudaharaadyo ka dhacay Washington DC ayaa lagu muujiyay sida looga soo horjeedo arxan darrada booliska
Waxaa dib usoo cusboonaaday Dhaqdhaqaaq ka dhan ah cunsuriyadda oo la aasaasay sanadkii 2013-kii markii la dilay wiil dhowr iyo toban jir ahaa oo lagu magacaabi jiray Trayvon Martin.
Xitaa magaalooyinka iyo tuulooyinka ay daggan yihiin dadka ugu badan ee caddaanka ah ayaa laga mudaharaaday iyadoo la xusayo Mr Floyd.
Sharci dajiyeyaasha ayaa soo bandhigay xeerar cusub oo wax looga baddalay qaabka ay booliska wax u xiraan iyo sida ay u hayaan dadka la tuhunsan yahay.
Laakiin arrintu durba waxay usii gudubtay mowduucyo kale oo ku saabsan sinnaanta shaqada, kala eexashada iyo is addoonsiga.
Maxaa ka dhacay Mareykanka bannaankiisa?
Mudaharaadyo looga soo horjeedo cunsuriyadda ayaa ka dhacay dalal ka mid ah caalamka, iyadoo looga fal celinayo dhimashadaas.
In badan oo ka mid ah dadka dibad baxayay waxay diiradda saarayeen dhibaneyaal waddamadooda dhexdooda ay boolisku ku waxyeelleeyeen, sida lagu eedeeyay.
Dalka Australia, waxaa diiradda la saarayay dhibaatooyin la sheegay in ay la kulmaan dadka asal ahaan loogu yimid waddankaas. Dalka UK waxaa lagu burburiyay taallo qarnigii 17-aad la dhisay oo muujineysa ganacsigii addoomada.
Shirkado badan oo si gaar ah loo leeyahay ayaa sidoo kale sameeyay barnaamijyo lagu taageerayo la dagaallanka cunsuriyadda ka dhanka ah dadka madow. Sidoo kale ciyaartoy badan ayaa ilaa hadda jilibka dhulka dhigta marka ay billaabayaan ciyaartooda, taasoo ah olole ka dhan ah cunsuriyadda.